Ushiku Daibutsu +++ - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
by Phyu Lwin on September 16, 2017
Universal Studio Japan (2) ~~~
Universal Studio Japan (1)~~~
ဒီပို့စ်လေးရဲ့ ဖြစ်တည်ရာက reader's digest က ဆောင်းပါးတစ်ခုကနေ အစပြုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ..။ ဒီနေ့ အဲဒီက ပို့စ်အသစ်တွေ ကြည့်ရင်းနဲ့ ကော်ဖီနဲ့ပ...
This and that @@
Hello 🙋 Back here again 😊😊😊 စိတ်အရှူပ်ရဆုံးကာလကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ မနေ့က Thesis ကို အပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေ...
မူကြိုကျောင်းတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည် …..။ ကလေးပေါင်းများစွာ အသက်အရွယ်အရ အကြီးဆုံးက ၅ နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိကြသည် ….။ ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အရွ...
Hello everyone, I've been so far away from this blog for almost one year coz my last post here was during August of last year. As fin...
Peachy Natural Makeup // Welcome Spring